Ciidamo la kala dhex-dhigay beelo ku dagaalamay Gobolka Sanaag – Geelle Mag
Ciidamo la kala dhex-dhigay beelo ku dagaalamay Gobolka Sanaag
Waxaa saaka xaalad deganaanshiya ah laga dareemayaa deegaanka Waqa-dariya ee gobolka Sanaag, halkaas oo shalay ay ku dagaalameen Maleeshiyaad iksu heystay Dahab iyo Macdano kale oo laga qoto buurta.
Dagaalka ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen Seddex Ruux oo labada dhinaca ah iyo dhaawaca tiro kale, waxaana wararka saaka nasoo gaaraya ay sheegayaan in ay bilawdeen waan waan lagu dhex-dhexaadinayo maleeshiyaadka dagaalamay.
Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanka ay maleeshiyaadka ku dagaalamaeen ay gaareen Ciidamo ka tirsan millateriga Soomaaliland iyo Odayaasha Dhaqanka Gobolka Sanaag, iyaga oo kala dhex-galay maleeshiyaadka dagaalamay.
Mid ka mid ah Odayaasha Dhaqanka deegaanka Waqa-dariya ee gobolka Sanaag ayaa sheegay in ay wadaan kulamo ay la yeelanayaan Odayaasha Dhaqnaka ay kasoo kala jeedaan Maleeshiyaadka dagaalamay, si xiisada loo joojiyo.
Deegaanka Waqa-dariya ee gobolka Sanaag ayaa waxaa sidaan oo kale horay ugu dagaalamay maleeshiyaad isku qabsaday dahabka iyo macdanka laga qoto Buuraha deegaankaas, waxaana dagaalada ay yihiin kuwo soo lab laabtay.
Sawiro:-Webiga Shabeelle oo fatahaad horleh sameeyay